Farmaajo oo waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Itoobiya
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda Itoobiya usoo magacawday Soomaaliya
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda Itoobiya usoo magacawday Soomaaliya.
Danjiraha Dowladda Federaalka Itoobiya Mudane Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan ayaa Madaxweynaha la wadaagay farriin iyo salaan uu uga siday Madaxweynaha dalka Itoobiya Marwo Sahle-Work Zewde, waxa uuna uga mahad celiyey shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed soo dhoweynta diirran ee uu kala kulmay.
Farmaajo ayaa waraaqadaha aqoonsiga ka guddoomay mid kamida waddamada uu saaxiibtinimada dhaw la yeeshay intii uu xilka hayay, waxa uuna uga mahadceliyay xiriirka waddankiisa uu la leeyahay dalka uu danjiruhu wakiilka ka yahay, isagoo uga warbixiyay guulo uu sheegay in la gaaray.
Danjire Cabdulfataax Cabdullaahi Xasan ayaa soo bandhigay sida ay uga go’an tahay adkeynta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashi iyo is-ixtiraam, waxa uuna muujiyey ahmiyadda ay leedahay dhowrista madax bannaanida dal walba.
Farmaajo wuxuu xiriirkii ujaray waddanka Kenya oo aan dariska nahay, waxa uuna kala soo baxay safiirkii Soomaaliiya u fadhiyay Kenya, kaasoo haatan ku biiray mucaaradka ku kacsan dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo, sidoo kale waxaa xun xiriirka waddanka labaad ee isna dariska la ah Soomaaliya ee Jabuuti, inkastoo uusan ku dhawaaqin in uu xiriirkii u jaray haddana waxay u egtahay haddii uu Farmaajo sii joogo Villa Somalia in uu isna xiriirka u jari doono.